Real Madrid oo guul soo laabasho ah ka gaartay Celta Vigo oo marti u aheyd, xilli uu saddexleey dhaliyay Benzema … +SAWIRRO – Gool FM
(Madrid) 12 Sebt 2021. Real Madrid ayaa guul soo laabasho ah ka gaartay kooxda Celta Vigo oo ku soo booqatay garoonka Santiago Bernabeu, kaddib markii ay kaga adkaatay 5-2.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 1-2 ay ku hoggaamineysay kooxda martida aheyd ee Celta Vigo
Daqiiqadii 4-aad kooxda kubadda cagta Celta Vigo ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta kaddib markii uu 0-1 ka dhigay laacibkooda Santi Mina, waxaana ka caawiyay goolkan saaxiibkiis Iago Aspas.
24 daqiiqo marka ay dheesha mareysay Karim Benzema oo caawin ka helay saaxiibkiis Federico Valverde ayaa wuxuu ciyaarta ka dhigay bar-bardhac 1-1 ah.
Laakiin daqiiqadii 31-aad kooxda Celta Vigo ayaa markale hoggaanka u qabatay ciyaarta, waxaana 1-2 ka dhigay laacibkooda Franco Cervi.
46 daqiiqo marka ay ciyaarta aheyd Karim Benzema oo ay caawin kaga timid Miguel Gutierrez ayaa wuxuu dheesha ka dhigay bar-bardhac 2-2 ah.
Balse daqiiqadii 55 –aad Real Madrid ayaa markan hoggaanka u qabatay dheesha waxaana 3-2 ka dhigay da’ayarka reer Brazil ee Vinicius Junior, kaddib markii uu caawin ka helay saaxiibkiis Karim Benzema.
72 daqiiqo Los Blancos ayaa sii dheereysatay hoggaanka ciyaarta kaddib markii uu 4-2 ka dhigay laacibkooda cusub ee Eduardo Camavinga.
Real Madrid ayaa loo dhigay rigoore daqiiqadii 88-aad waxaana gool u badelay Karim Benzema, ciyaarta ayaa sidaas ku noqotay 5-2 ay ku hoggaamineysay Los Blancos.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku dhammaatay 5-2 oo ay kaga adkaatay Real Madrid, kooxda Celta Vigo oo ku soo booqatay garoonka Santiago Bernabeu, ciyaar qeyb ka aheyd kulammada isbuuca afaraad horyaalka La Liga ee dalka Spain.
Tababare Jurgen Klopp oo ka fal celiyay dhaawacii isbitaalka lala dhigay xiddiga kooxdiisa Liverpool ee Harvey Elliot